Qabiilka oo qaatay doorkii axsaabtii siyaasadeed (Faalo) | Warfaafiye	Home
Tuesday, August 14th, 2012 | Posted by admin Qabiilka oo qaatay doorkii axsaabtii siyaasadeed (Faalo)
Waxaa la soo gaaray waqti KMG-nimada Dowladda Soomaaliya ay tahay gabogabo, Magaalo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa hareeyay tartamo siyaasadeed iyo dhaqdhatqaaqyo loogu xusul duuban yahay dhisidda Baarlamaan dastuuri ah ee cusub, kaasi oo dooran doona Hoggaankii wadanka, guddoonka iyo guddiyada joogtada ah ee Golaha shacbiga.
Soomaaliya waxay ku qariban tahay, waxaan u kala soocneyn siyaasadda iyo dhaqanka. Sarreynta dhaqanka qabiilku wuxuu ka awood badan yahay sharciga iyo caqiiqadada. Dad baa u miyir beelay xubinnimada Baarlamaanka, qaarba la soo taagan xoolo wixii ay haayaan inay ku bxiyaan, halka kuwo kalena waalida ka muuqata darteed geeri la diyaar ah, sida qaar ka mid ah qabqablayaashii hore ee dagaalka iyo kuwa kale ee qiirada qabyaaladdu dilootay. Waxaa kala taagan jufooyinka ay ka soo jeedaan dadka ku jira ololaha iyo Salaadiintooda.
Sabanadaan qabiilka waxaa lagu arkay inuu ka baxo xuduudihiisa dhaqanka, loona isticmaalo inuu matalo doorarkii xisbiyada Siyaasadeed iyo mida maamulka. Awoodaha siyaasadda waxaa looga mid noqonayaa xulataan loo maro qabiilka. Waxa lagu sheego maamul goboleedyadana, waa qabiil is-huwiyay astaamihii maamulka iyo xeerarkii dowlada sida kuwa hadda jira ay yihiin oo kale.
Xaalada burburka ayaa waxay saameysay dhinac walba ee nolosha ummadda, midda Siyaasadeed iyo maamulka wadanka, Baarlamaan ku imaanaya 4.5 ayaa laga rajeynayaa inuu dhiso nidaam dastuuri ah ee Soomaaliya kaga baxeyso xaaladdii burburka iyo hababkii fashilmay ee ku meel-gaarnimada. Qabiilkii wax burburinayay ayaa noqday minqiyaas “Standard” loo isticmaalo awooda dowladda islamarkaana loo doortay inuu noqdo midka hadda ugu muhiimsan ee dhisaaya Qaran Soomaaliyeed ee mideysan, nabadna ah, taasoo xeerarka hadda la guddoonsaday u ah wadiiqo loo hab raacaayo mabaadiida nolosha siyaasadeed ee dalka.
Laaluushka, masuq maasuqa iyo adeegsiga qabyaalada ee looga mid noqonaya awoodaha xukunka ayaa waxaa laga dhigay waajibaad aasaasi ah, shuruudaheena looga gudbaayo xaaladaha siyaasadeed ee KMG ah, taasoo taariikhada adduunka inta laga yaqaan aan weli lagu arkin. Waa habab bidaa’i ah oo aan qayb ka ahayn ilbaxnimada casriga ah, horumarka iyo cilmiga saldhigga u ah himilada bulshooyinka aadamiga ah. Beesha caalamka waxay ku taageereysaa Soomaaliya in tallaabooyinka geeddi socodka ah ee loogu gudbaayo marxaladaha dastuuriga ah in loo maro hababkaas, taasoo qiil looga dhigay Soomaali waxa ay goosatay, ayaan ku la shaqeeneynaa.
Iyadoo hadda lagu muransan yahay ama dhaliilo badan oo qatar ah kasoo qamqamayaan sidey hada wax ku socdaan, baarlamaanka kasoo baxo ayaa la sugayaa in lagu haleeyo aayaha Soomaaliya oo awalba dastuurkii la ansixiyay lagu dhaliilaayay inay ku jiraan qodobo aan waafaqsaneyn Qaranimada, Midnimada iyo Wadajirka Wadanka, Hababka Siyaasadeed ee Xiriirka Awoodaha Dowladda, Diinta iyo Dhaqanka.
Loolanka jufo kasta ee dhexdeeda ah iyo culeyska dusha looga keenayo guddiyada farsamada, kuwa xalinta khilaafaadka iyo odayaasha dhaqanka kuwooda xareysan ayaa daaha waxa ay kaa qaadaayaan inuu jiro shaki iyo dareen ku aaddan waxa soo bixi kara inay xalaal noqon karaan. Waxaa imaan kara su’aal in la iska weydiiyo sharciga iyo xeer dhaqameedka hadda socda keebaa mustaqbalka aasaas noqonayaa, iyada oo dhanka kalena la arkayo daal iyo in qatiyaan laga joogo jufooyinka iyo faragelinta siyaasiyiin awood sheegad ah sidii looga soo xuli lahaa xubnaha ka mid noqonaya Baarlamaanka soo socda.
Arrimahaas waa dhab inay xataa abuuri karaan shaki ah howlaha socda in lagu soo dhammeystiri waayo ka hor 20-ka bishanm Wax kasta oo khalad ku bilowda waxay halis u yihiin in ay fashil ku dhamaadaan
Posted by admin on Aug 14 2012. Filed under Somali News.
Raii,Sul Waasre Saacid oo Muqdisho kula kulmay Danjire Annadif